Joe Biden Banaanka keenay qorshihii Mareykanka ka lahaa Afghanistan, isagoo difaacay ka bixitaanka ciidamadiisa. | Warbaahinta Ayaamaha
Joe Biden Banaanka keenay qorshihii Mareykanka ka lahaa Afghanistan, isagoo difaacay ka bixitaanka ciidamadiisa.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Madaxweyne Joe Biden ayaa si adag u difaacay go’aankiisii ​​ahaa in ciidamada Mareykanka laga saaro Afghanistan wuxuuna diiday dhaleeceyn ballaaran oo ku aaddan bixitaankii ciidamada Maraykanka taasoo dhalisay in Daalibaan la wareegay maamulka dalka Afghansitan.
Biden ayaa sheegay in howlgalka Mareykanka uusan marnaba ahay dhisme qaran,waxana uu ku eedeeyay qabsashada Talibanka ee dalka inay tahay rabitaan la’aanta ciidamada Afghanistan inay la dagaallamaan kooxda xagjirka ah.
Kumanaan qof oo rayid ah oo quus ka taagan inay ka qaxaan Afgaanistaan ​​ayaa buux dhaafiyay waddada kaliya ee garoonka diyaaradaha ee Kabul Isniintii ka dib markii Taliban ay qabsadeen caasimadda, taasoo keentay in Mareykanka uu joojiyo daad -gureynta maadaama ay la kulmeen dhaleeceyn badan oo gudaha ah.
Shan qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen fowdada. Sarkaal Mareykan ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in laba dabley ah ay ciidamada Mareykanka halkaas ku dileen 24 -kii saac ee la soo dhaafay.
Maxaa Caawa ka socda Xafiiska Ra’iisul wasaare Rooble iyo wararkii...
Booliiska Galmudug oo warqad codsi ah u diray Madaxda Ahlisuna.
Muxuu yahay u jeedka safarka Taliyaha Ciidanka lugta Uganda ee lakulay...
Masuuliyiin badan oo ka hadashay geerida majaajiliistihii caanka ahaa ee Ajakis.